Maxaa ku soo kordhay doorashada Koonfur Galbeed | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta Maxaa ku soo kordhay doorashada Koonfur Galbeed
Maxaa ku soo kordhay doorashada Koonfur Galbeed
Magaalada Baydhabo ee Caasimadda KMG ah ee mamaulka Koonfur Galbeed waxaa saacaddihii lasoo dhaafay ka dhacay kulamo kala duwan oo looga hadlaayo Xaaladda Qabashadda doorashadda Madaxtinimadda maamulka Koonfur Galbeed.
12 Xubnood ee ka haray guddigii doorashadda Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ayaa sheegaya in ay sii wadayaan Shaqadda,islamarkaana doorasho ay ku dhici doonto xilligii loogu tala galay.
Ku simaha Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ayaa wada dadaallo kala duwan oo ku aadan in la kordhiyo Guddiga doorashadda Madaxtinimadda maamulka Koonfur Galbeed si doorashaddu ugu dhacdo sidii loogu tala galay.
15 xubnood ka mid ah Guddiga doorashadda ayaa horay ugu dhawaaqay in ay joojiyeen shaqaddii loo idmaday ka dib markii dowladda dhexe ay ku eedeeyeen in ay dhibaato weyn ku heyso doorashadda maamulka Koonfur Galbeed.
Previous articleCiidamada Israel oo Qaza ku dilay 6 qof
Next articleTirada dadka ku dhintay dab ka kacay California oo korortay